Madheshvani : The voice of Madhesh - News Portal
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक र ब्लु क्रस अस्पतालबीच सम्झौता
काठमाडौं, १४ पुस । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक र ब्लु क्रस हस्पिटलबीच सम्झौता भएको छ । बैंकले अस्पतालले दिने विभिन्न सेवा सुविधाहरुमा आफ्ना खातावालाहरु, क्रेडिट र डेबिट कार्ड ग्राहकहरु तथा संस्थापक सेयरधनीहरुलाई सहुलियत प्रदान गर्ने विषयमा सम्झौता गरेको हो ।
सिद्धार्थ बैंक र सस्तो टिकेटबीच सहकार्य, अनलाइनबाटै विदेशी मुद्रा माग गर्न सकिने
काठमाडौं, १३ पुस । सिद्धार्थ बैंकले आफ्नो सेवा सुविधालाई थप सहज र प्रविधिमैत्री बनाउनलाई सस्तो टिकेटसँग सहकार्य गर्दै विशेष सुविधा ल्याएको छ । सिद्धार्थ बैंकले विगत १७ वर्ष देखि उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
बिईगं ह्युमन क्लोथिङको ’रिब्रान्डीङ’
काठमाडौं, १३ पुस । नेपालको बिईगं ह्युमन क्लोथिङको ’रिब्रान्डीङ’ गरिएको छ ।
सामुदायिक लघुुवित्त वित्तीय संस्थाको ३२% सेयर बोनस पारित
काठमाडौं, ११ पुस । सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, साँगा, बनेपा–१४, काभ्रेपलाञ्चोकको छैंठौं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ ।
आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष ढकालद्वारा महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी घोषणा
काठमाडौं, ११ पुस । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवम् आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने औपचारिक घोषणा गरेका छन् ।
सुजुकी धमाका ‘सुपर स्याटरडे’
काठमाडौं, ११ पुस । यही आउँदो पुस १२ गते सुजुकी ब्राण्डका गाडीको आधिकारीक विक्रेता तथा सीजी होल्डिङको अटोमोटिभ डिभिजन सीजी मोटोकर्पले शनिवार ‘सुपर स्याटरडे’ आयोजना गर्ने भएको छ ।
काठमाडौं, ९ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी सेलपे सेवाले ई( कमर्स प्लेटफार्म सस्तोडिलरसँग सहकार्य ) गरेको छ । उक्त सहकार्य अनुसार आगामी क्रिसमस र अंग्रेजी नयाँ वर्षलाई लक्षित गर्दै सेल ए ब्रेसन अफरको लागि सहर्काय गरेको कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
जस्मिन पेन्ट्सले मनायो २५औं वार्षिक उत्सव
काठमाडौं, ९ पुस । जस्मिन पेन्ट्स प्रालिले २५ वर्षको व्यवसायिक यात्रा पुरा गरेको छ । यसै अवसरमा चितवनस्थित मनकामना ग्रुप अन्तर्गत जस्मिन पेन्ट्स प्रालिले रजतजयन्ती महोत्सव आयोजना गरेको छ ।
निसान किक्स गाडी ४५० वटा बिके
काठमाडौं, ९ पुस । पायोनियर मोटो कर्पले नेपालभर चार सय ५० भन्दा बढी निसान किक्स गाडी बिक्री गरिसकेको छ । यही उपलक्ष्यमा आफ्ना ग्राहकलाई विशेष लाभ सहितको योजना ल्याएको छ । पायोनियर नेपालका लागि निसान र डयाटसन गाडीको आधिकारिक बिक्रेता हो ।
गायत्री एण्ड सन्सले बजारमा जाडोका घरायसी सामग्री ल्यायो
काठमाडौं, ९ पुस । नेपालीका लागि उच्च गुण्स्तरीय घरायसी सामग्री आपुर्ति गर्दै आएको जनाउँदै जाडोका लागि हिन्डवेयर, लाइफर, पोलार र सन्फेल्मको सामाग्री वितरण गर्दै आएको गायत्री एण्ड सन्स प्रालिले जनाएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङले कुलमान घिसिङ र डा.सन्दुक रुइतलाई सम्मान गर्ने
काठमाडौं, ९ पुस । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सौजन्यमा नेपाल जनप्रशासन संघ(पान) द्वारा स्थापित ‘हेमबहादुर मल्ल सम्मान पुरस्कार ’ नेपाल विधुत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र डा. सन्दुक रुइतलाई प्रदान गरिने भएको छ ।
ग्रान्डी अस्पताल र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकबीच सम्झौता
काठमाडौं, ८ पुस । धापासीस्थित ग्रान्डी इन्टरनेशनल अस्पताल र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकबीच विभिन्न सेवा सुविधामा दिइने छुटसम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।
सिटी सेन्टर विन्टर फेष्टमा भारी छुट
काठमाडौं, ८ पुस । काठमाडौंको मुटु कमलपोखरीमा रहेको व्यावसायिक भवन सिटी सेन्टरले विगतझै नयाँ वर्ष २०२० तथा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम ‘सिटी सेन्टर विन्टर फेष्ट विथ म्यासिभ सेल’ को घोषणा गरेको छ ।
नेपाल बंगलादेश बैंकले ५ प्रतिशत बोनस सेयर र सात प्रतिशत नगद लाभांश दिने
काठमाडौं, ८ पुस । नेपाल बंगलादेश लिमिटेडले काठमाडौंमा हालमै २५औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ ।
एनसीसी बैंकले १५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्दै
काठमाडौं, ८ पुस । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक( एनसीसी) ले १५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
तौलिहवामा प्रभु बैंकको नयाँ शाखा
कपिलवस्तु, ७ पुस । तौलिहवामा पनि प्रभु बैंक लिमिटेडले नयाँ शाखा खोलेको छ । बैंकले आफ्ना शाखा सञ्चाल विस्तार गर्ने क्रममा आइतबारदेखि कपिलवस्तु जिल्लाको कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नं. ०१ स्थित तौलिहवामा आफ्नो २०२ औं शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
सनराइज बैंक र मास्टरकार्डबीच सहकार्य
काठमाडौं, ७ पुस । आफ्ना ग्राहकहरुको सहजतालाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड सेवा प्रदायक भिसा र युनियन—पे ब्राण्डहरुसँग सनराइज बैंकले सहकार्य गर्दै आएको छ ।
लक्ष्मी बैंकको १९औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
काठमाडौं, ७ पुस । लक्ष्मी बैंकले १९ औं वार्षिक साधारणरभा सम्पन्न गरेको छ । बैंकले आइतबार वार्षिक साधारभाणस सम्पन्न गरेको हो ।
अरुको नम्बर सजिलै टेलिकमको वेबसाइटबाट खोज्न पाइने
काठमाडौं, ७ पुस । कुनै पनि व्यक्ति तथा संस्थाको स्थानीय टेलिफोन नम्बर थाहा पाउन सकिने भएको छ ।
गरिमा विकास बैंकले रक्तसञ्चार सामग्री हस्तान्तरण
काठमाडौं, ६ पुस । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले रक्तसञ्चार सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्र्तगत नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला कार्यसमिति कास्कीलाई रक्तसञ्चार सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो
दुई क्यापिटल गाभिने
काठमाडौं, ६ पुस । प्रभु क्यापिटल र समृद्धि क्यापिटल एक हुने भएका छन् ।
सानिमा प्रथम घर कर्जा योजना लागु
काठमाडौं, ६ पुस । सानिमा बैंकले ‘सानिमा प्रथम घर कर्जा’ को योजना ल्याएको छ । आफ्नै घर बनाउन वा खरिद गर्न चाहनेलाई लक्ष्य गर्दै सानिमा बैंकले ‘सानिमा प्रथम घर कर्जा’ को विशेष कर्जा सुविधा योजना ल्याएको हो ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकको १३ औं साधारणसभा सम्पन्न
काठमाडौं, ६ पुस । मुक्तिनाथ विकास बैंकले नयाँ संचालक समितिको चयन गरेको छ । बैंकको १३ औं वार्षिक साधारणसभाले आगामी चार वर्षको लागि नयाँ सञ्चालक समितिको चयन गरेको छ ।
एनसेलकोे सुलभ दरको भ्वाइस प्याक
काठमाडौं, ६ पुस । एनसेलले रातीको समयमा सुलभ दरमा कुराकानी गर्न सक्ने अनलिमिटेड नाइट भ्वाइस प्याक ल्याएको छ ।
विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्न निशुल्क विद्युत मिटर वितरण
कपिलवस्तु, ६ पुस । यशोधरा गाउँपालिको वडा नं ८ मा निःशुल्क विद्युत मिटर वितरण गरिएको छ । विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्न निःशुल्क विद्युत मिटर वितरण गरिएको छ ।